ကလေးခရိုင်အတွင်း သစ်တောဧက ၄ဝဝဝ ကို ဒေသအစုအဖွဲ့ပိုင် အဖြစ် တည်ထောင်ခွင့်ပေးထား - Yangon Media Group
ကလေးခရိုင်အတွင်း သစ်တောဧက ၄ဝဝဝ ကို ဒေသအစုအဖွဲ့ပိုင် အဖြစ် တည်ထောင်ခွင့်ပေးထား
ကလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၇
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးခရိုင်အတွင်း အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောတည် ထောင်ခွင့်ကို ဇန်နဝါရီလဆန်းမှ စတင်ခွင့်ပြုခဲ့ရာ သစ်တောတည် ထောင်ခွင့်ဧက ၄ဝဝဝ ကျော် လုပ် ကိုင်ခွင့်ပြုထားကြောင်း ကလေးခရိုင်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိတစ်ဦးက ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က ပြောကြားသည်။ ကလေးခရိုင် သစ်တောကြိုး ဝိုင်းနယ်မြေများတွင် နေထိုင်သူ ဒေသခံများကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောများတည်ထောင်ခွင့် လက်မှတ်များထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောတည်ထောင်ခွင့်ကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး တည် ထောင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသတွင်းနေထိုင်သူ တွေရဲ့ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စီးပွားရေးအတွက်လည်း အဆင်ပြေနိုင်တာ ဖြစ်သလို သီးနှံသစ်တောရောနှော စိုက်ပျိုးမှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ကလေးခရိုင်တစ်ခုလုံးတွင် (Community Forestry) အစုအ ဖွဲ့ပေါင်း ၆၂ ဖွဲ့ကို အဖွဲ့ဝင်အင်အား ၁၂၅၁ ဦးဖြင့် တည်ထောင်ထားပြီး ယခုလက်ရှိအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ် တောဧရိယာမှာ ၄၇၁ဝ ဒသမ ၂၆ ဧကရှိကြောင်း၊ ကလေးမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက် အရ ကလေးမြို့နယ် သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု ဧရိယာမှာ ၄ဝ၆၇၈၄ ရှိပြီး ကလေး၊ ကလေးဝ၊ မင်းကင်းမြို့ နယ်သုံးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ကာ ယင်းမြို့နယ်သုံးခုတွင် သစ် တောဖုံးလွှမ်းမှုဧရိယာမှာ ခရိုင်တစ် ခုလုံး၏ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သိရသည်။
”အခုလို အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ် တောတွေ ထူထောင်လာတယ်ဆို တော့ ဒေသတွင်း သစ်တောဖုံးလွှမ်းတဲ့ ဧရိယာကိုလည်း ထိန်းသိမ်း ပြီးသားဖြစ်သလို အခြားသစ် တော တွေကိုလည်း စောင့်ရှောက်မှုဖြစ် စေပါတယ်။ အစုအဖွဲ့ပိုင်ဆိုတော့ သစ်ပင်သစ်တော အစားထိုးစိုက် ပျိုးမှုကိုလည်း ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
အထောက်အထား မတင်ပြနိုင်ကြသဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ချေးငွေလျှောက်ထားသူများအနက် ရှစ်ဦးကိုသ??
''ပရိသတ်တွေရဲ့ တွန်းအားပေးမှုတွေကြောင့် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အများကြီးကို မြင?
မုံရွာချင်းတွင်းသင်္ကြန်၌ ပြသရန် သဲပန်းပုရုပ် ၂ဝ ကို စတင် ထုလုပ်
ပို့ဘလဲယား အကျဉ်းထောင်များတွင် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည့် မြန်မာရေလုပ်သား ၁၁ ဦး မြန်မာစေတနာရှ??
လူမြင်ကွင်းမှ ကာလရှည် ပျောက်ကွယ်နေသည့် ကင်ဂျုံအန်ညီမ ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာ
မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ညီလာခံ ကျင်းပ၊ မြန်မာ့မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆွေးနွေး
ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း တင်ဒါအောင်ထားသည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့်မကြာမီသဘောတူညီမှုရရှိ?
မူဆယ်မြို့ အနီးတွင် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ထွက်ပေါက်အသစ် ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်နေ